फुकुशिमा पानी परिशोधन सिस्टम तल फेरि - समाचार नियम
फुकुशिमा पानी परिशोधन सिस्टम तल फेरि
अंग्रेजी: एक फुकुशिमा म आणविक पावर प्लान्ट भ्रमण गरेर टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी प्रायोजित जुन मा खिचिएको फोटो को 23, 1999. जापानी: जुन 1999 फुकुशिमा मा पहिलो आणविक पावर प्लान्ट मा भयो कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी-प्रायोजित भ्रमण मा (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
लङ्गडो जापानको को अपरेटर फुकुशिमा आणविक प्लान्ट मंगलवार भने यो विकिरण-दूषित पानी सफा गर्न प्रयोग एक प्रमुख परिशोधन सिस्टम बन्द थियो, बस घण्टा पछि यो अनलाइन फिर्ता आए.
टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर (TEPCO) यसको विकसित तरल प्रशोधन प्रणाली बन्द (आल्प्स) कामदारहरूको लिक पत्ता पछि “seeping” एक ट्यांक लेट सोमवार देखि.
झन्डै आठ लिटर (2.1 गैलन) दाग लागेको पानी बाहिर लीक छन् विश्वास गरिन्छ, एक कम्पनी प्रवक्ता भन्नुभयो. पानी बरामद गरिएको थियो रूपमा उहाँले त्यहाँ थियो कुनै तत्काल सुरक्षा जोखिम थप.
को embattled अपरेटर प्रणाली मा दुई तीन लाइनहरु मा स्वीच पछि निलम्बन बस छ घण्टा आए, जो विकिरण-दूषित जापानको विनाशकारी द्वारा क्षतिग्रस्त भएको रिएक्ट्र्स शांत गर्न प्रयोग पानी सफा 2011 भूकम्प-सुनामी प्रकोप.
सारा सिस्टम TEPCO एक दोष पत्ता पछि बन्द गरिएको थियो अन्तिम बुधवार. फर्म बारम्बार प्रणाली ग्लिचहरू को एक श्रृंखला भन्दा स्वीच अफ छ परीक्षण सञ्चालनका एक वर्ष पहिले थाले पछि.
TEPCO एक विशाल ह्यान्डल गर्न संघर्ष — र बढ्दै — भुकम्प-सुनामी निम्न फुकुशिमा मा दूषित पानी मात्रा, जो एक पुस्ता मा सबैभन्दा खराब परमाणु संकट sparked साथै टाढा केही व्यापक 18,000 सिकार.
विशाल छालहरू को बोट मा दुर्घटनाग्रस्त, रिएक्टर meltdowns र विस्फोट sparking. को भंग हुनेवाला साइट सफाई दशकहरूमा लिन अपेक्षित छ.
बारेमा छन् 436,000 दूषित पानी घन मीटर बारेमा मा साइट मा भण्डारण 1,200 उद्देश्य निर्मित ट्यांक.
धेरै विशेषज्ञहरु केही बिन्दुमा पानी सबैभन्दा हानिकारक प्रदूषक को स्क्रब्ड भएपछि समुद्रमा जारी गर्न हुनेछ भनेर भन्न.
तिनीहरूले यो समुद्री जीवन वा मानिसहरूलाई एक नगण्य जोखिम पुऱ्याउन हुनेछ भन्न, तर स्थानीय माझिहरु र छिमेकी देशहरूमा fiercely विरोध गर्दै.
Repost.Us – यो लेख प्रकाशित
यो लेख, फुकुशिमा पानी परिशोधन सिस्टम तल फेरि, बाट सिन्डिकेट छ एएफपी र अनुमति यहाँ पोस्ट. प्रतिलिपि अधिकार 2014 एएफपी. सबै अधिकार सुरक्षित
20742	0 फुकुशिमा, जापान, आणविक पावर प्लान्ट, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी
← कटौती गर्न शाही मेल 1,600 जब MH370 पहिलो कानुनी कारबाही सुरु पछाडि रूपमा खोज →